Ra (andriamanitra) - Wikipedia
Ny andriamanitra Ra
I Ra na Re dia andriamanitra masoandro nivavahan'ny Egiptiana taloha, izay ninoany fa andriamanitra mpamorona izay rehetra izao. Afaka niseho amin'ny endrika maro hafa izy, dia i Kepry ilay voangory mpiasa tain'omby, sarin'ny fahaterahana na ny fahateraham-baovao, na koa i Atoma, "ilay tanteraka" na "efa". Manazava ny mpitodra fivavahana egiptiana fa ny masoandro dia afaka miseho amin'ny endrika samihafa rehefa mamakivaky ny lanitra: i Kepry dia ny masoandro miposaka fa i Ra (na Re) kosa dia ny masoandro mlitatao vovonana, ary i Atoma dia ny masoandro milentika.
Rehefa ela ny ela dia nataon'ireo teôlojiana egiptiana ho endrik'i Ra (masoandro mitataovovonana) i Atoma (masoandro lilentika) ka lasa fomba fiteny ny hoe "Ra-Atoma" na "Re-Atoma", izay andriamanitra mpamorona, manapaka ny vondron' andriamanitra sivy lehibe (Eneada Lehibe). Taorian'izany koa dia nampitovina amin'ny andriamanitra hafa toa an'i Amôna i Ra ka lasa "Amôna-Ra" na "Amôna-Re".
Maro ireo fitantarana momba ny nahaterahan'ny andriamaitra Ra. Amin'ny fitantarana iray dia lazaina fa nateraky ny andriamani-bavy Neita, izay niteraka azy tahaka ny atody, izy. Nivoaka ny atody i Ra ka nojambain'ny fahazavana. Izany fahazavana izany no ranomasony ka niteraka ireo olombelona voalohany. Ny fitantarana iray hafa, izay taterin'i Neil Philip ao amin'ny asasorany atao hoe Mythes et Légendes, dia milaza izao: namoron-tena i Ra tamin'ny fanononany ny anarany, toy ny namoronany koa ny zavatra hafa rehetra momba ny fiainana tamin'ny famoahany azy ireo avy tao amin'i Nôona, dia ilay ranomasim-be voalohany. Lasa andriamaitra lehibe voalohany izy tamin'ny Empira Voalohany tao Egipta. Matetika i Ra dia aseho amin'ny alalan'ny lohan-kitsikitsika ipetrahan'ny kapilan'ny masoandro izay arovan'ny bibilava kôbra mitsangana.
Ny andriamaitra Ra koa dia akambana amin'ny andro voalohany amin'ny taona (taom-baovao). Ny andro voalohan'ny fizaran-taona Aketa (Akhet) ao amin'ny tetiandro egiptiana, izay taom-baovao egiptiana dia andro ankalazana an'i Ra araka ny papirosy sy ny ôstraka tamin'ny andron'ireo Ramsesy, ary araka ny voalaza ao amin'ny papirosy roa hafa, dia andro nahaterahan'i Ra izany. Ao amin'ireo Lahatsoratry ny Piramida dia atao hoe "tompon'ny taona" i Ra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra_(andriamanitra)&oldid=996393"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2020 amin'ny 08:36 ity pejy ity.